राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा १५ ओटा कविता प्रतियोगितामा समावेश – रोल्पा समाचार
२०७५ जेष्ठ १९, शनिबार १५:०० गते
राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा १५ ओटा कविता प्रतियोगितामा समावेश
रोल्पा समाचारदाता on २०७५ जेष्ठ १९, शनिबार १५:०० गते
रोल्पा नगरपालिको आयोजनामा बृहत साहित्य सम्मेलनको रोल्पाको आज जलस्रोत, सिचाई एवं उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले विहान ११ बजे लिबाङको टुडिखेलमा उद्घाटन गर्नु हुने भएको छ । सो राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नका लागि शनिबार साँझ मन्त्री वर्षमान पुनमगर लिबाङ आई पुग्नुभएको छ । राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता आएका १ सय ५४ ओटा कवितामध्ये प्रतिस्पर्धाका लागि १५ ओटा कविता बाचनका लागि छनौट भएको छन् ।
प्रतियोगिताका लागि छनौट भएका कविता कविहरु अमि प्रिन्स (काठमाण्डौं), अशोक नेपाल (दोलखा), कमल विवश मगर (रोल्पा), गिरि मीश्र मगर (बाग्लुङ), गणेशप्रसाद खतिवडा (सोलखुम्ब), देशवन्धु आचार्य (रुपन्देही), निशान निस्कर्ष (गोरखा), प्रज्वल अधिकारी (लमजुङ), लक्ष्मण सङ्गम (अछाम), वीरेन्द्र जैसी (अछाम), संगीत मगर (रोल्पा), सामीर गौतम (रुकुम पूर्व), सुरेश बुढाथोकी ‘रहर’ (सिन्धोली) सुष्मा श्रेष्ठ (पाल्पा) हेमन्त शिशिर (बाँके) जिल्लाका कविको कविता ‘राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिताका लागि छनौट भएका छन् । त्यसैगरी प्रतियोगिताका लागि छनौटमा पेरको कविताका कविहरु कृष्ण विश्वकर्मा चितवन निबासी हाल युएइ, प्रेम खड्का गुल्मी जिल्ला निबासी हाल भारत, वासुदेव पाण्डेय ‘प्रभाकर’ बैतडी जिल्ला निबासी परीक्षाको कारण, विवेक दुलाल क्षेत्री दमक झापा जिल्ला निबासी हाल युइएमा भएको कारण प्रतियोगिताको लागि छनौट भएको कविता बाचन गर्न आउन सक्ने आयोजकलाई जानकारी दिएको सञ्चार संयोजक नविन लोचन मगरले बताउनुभयो । छोटो समयमा नै १ सय ५४ ओटा कविता आउनु भनेको पहिलो कुरा त साहित्यप्रतिको युवा आकर्षण निकै उत्साहजनक नै हो ।
रोल्पा जिल्लामा आयोजक राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिताका लागि १ सय ५४ ओटा कविता सुरुवामा आउनु नै आयोजकलाई खुशीको कुरा हो । त्यस्तै नेपालमै सबैभन्दा धेरै राशीको कविता प्रतियोगिता जिल्लामा सम्पन्न हुँदैछ । साथै वर्तमान समयमा समाजिक सञ्जाल र माध्यममा प्रचार–प्रसारमा जिल्लाका मिडियाको साथले पनि १ सय ५४ ओटा कविता आएको हो । मूल समारोह समिति क्रियाशिलताको कारणले पनि यति धेरै रचनाहरु आएका हुन् । बृहत साहित्य सम्मेलन जिल्लाको एउटा ऐतिहासिक साहित्यिक कार्यक्रम हो । यो रोल्पाको इतिहासमा पहिलो पटक रोल्पा नगरपालिकाले आयोजना गरेको हो । बृहत साहित्य सम्मेलन २०७५ का मूल समारोह समितिका संयोजक डी.बी. टुहुरोले भन्नभयो ः–“यसमा विभिन्न कार्यक्रमहरु संलग्न छन् जसअन्तर्गत ‘राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता’ पनि आयोजना गरिएको छ । यसको पहिलो उद्देश्य भनेको साहित्यको माध्यमबाट रोल्पालाई देशव्यापी चिनाउनु नै हो । अर्को कुरा हामीले साहित्य र पर्यटनलाई सँगै जोडेर लाने कुरा पनि गरेका छौं । ‘पर्यटनका लागि साहित्य’ हाम्रो नारा नै छ । साहित्यमार्फत् रोल्पाका पर्यटकीय सम्भावनालाई कसरी प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अर्को उद्देश्य हो । ”
रोल्पा परिवर्तनको सम्वाहकको रुपमा पनि विश्वमा चिनिएको छ । जुन पृष्ठभूमिमा रोल्पाले आफ्नो परिचय स्थापित गरेको छ, रोल्पा त्यो मात्र हैन । यहाँ युद्ध पर्यटनका हिसाबले ठूला–ठूला युद्धस्थलहरु छन् । ४६ जनाको एउटै चिहान भएको पाटे गुम्चालजस्ता क्षेत्रहरु छन् । एउटै गाउँबाट ६३ जनाले ज्यान गुमाएको जेल्बाङहरु छन् । जनकम्युन सञ्चालन भएको थबाङ, विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक चर्चामा रहेको थबाङ, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को कार्यकालमा सञ्चालन गरिएको अभियानबाट निर्माण गरिएको शहीद मार्ग, जननमूना अस्पताल घोर्नेटी ओट, पहिलो आक्रमण गरिएको होलेरी लगायत शान्तिकालीन समयमा माओवादी सेनाको अस्थायी ब्यारेक दहवन क्षेत्र लगायत दर्जानौँ स्थानहरु छन् । सँधै राज्यको प्रतिपक्षजस्तो देखिने थबाङहरु छन् यी ऐतिहासिक तथ्यहरुको प्रचारप्रसार आवश्यक छ । धार्मिक हिसाबले स्वर्गद्वारी महाप्रभुको जन्मस्थल रुन्टीगढी क्षेत्रदेखि पर्यटकीय स्थल जलजलाहरु समेत हाम्रो सामु छन् । रोल्पा नगरपालिकाभित्र पनि त्यस्ता ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रहरु छन् । जस्तो सामुदायिक होमस्टे गुरुङगाउँमा संचालित छ, सातदोबाटो क्षेत्र आफैमा मनमोहक छ । यी सबै कुरालाई साहित्यको माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ, अथवा हाम्रा सम्पत्तिलाई साहित्यको माध्यमबाट बेच्नु र रोल्पालाई धनी बनाउनु कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । रोल्पा जिल्लाका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरुको प्रवर्धनमा टेवा पु¥याउने उद्वेश्यले नै यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । साथै स्थानीय उत्पादन अल्लो, टिमुर, भाङ्गो, जडीबुटी लगायको प्रचार प्रचार गरी रोल्पा जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने यात्रामा बृहत साहित्य सम्मेलनको महत्व रहेको बताइएको छ । जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रका कवि, गजलकार, एवं अग्रह स्रष्टाहरुको आगमन भइरहको समितिले बताएको छ । सबै तयारी पुरा भइसकेको समेत प्रचार संयोजक नविन लोचन मगरले बताउनुभयो ।
जिल्लाको शिक्षा विषयमा साझा सभा कार्यक्रम सम्पन्न
हल्लै हल्लाको ठाउँ अनि म (कविता)
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७२ पुष ६, सोमबार ०५:४० गते २०७२ पुष ८, बुधबार १३:१६ गते
अध्यारो रात सुनसान र चुपचाप किनकी सबै–सबै सुतेका छन । तर पनि मानव माथिका दानवहरु जुवाडेहरु,जडियौ, अस्मिता बेच्नेहरु यथार्थ रातलाई रात...
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७३ पुष २३, शनिबार १६:२९ गते
बुढाको ९ वटा रचना बाचन रोल्पा समाचार साप्ताहिकमा २०७३ साल पुस २४ मा प्रकाशित स्रष्टा भगवती बुढामगरले शनिबार लिबाङमा एकल रचना...
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७२ पुष ६, सोमबार ०५:१० गते २०७२ पुष ८, बुधबार १३:२० गते
-रोशन कोइराला साँझ संगीत भएर बग्दैछ म मिथ्या रागहरु गाडीका हर्न र पसलका प्वालहरुबाट उम्लिइ आउने योजना र हारका फेहरिस्तमा सडकभरि...
स्रष्टा चौतारी श्रृङ्खलाको अवसरमा साहित्यिक रचना सुनाउने र सुन्नेको विकास हुँदै
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७४ चैत्र १५, बिहीबार १६:०७ गते २०७४ चैत्र १५, बिहीबार १६:०८ गते
रोल्पा समाचारदाता लिबाङ–रोल्पा, साहित्यिक क्षेत्रको विकासको निम्ति प्रत्येक महिनाको १५ गतेका दिन जिल्लामा नियमित अभियानकै रुपमा सञ्चालित स्रष्टा चौतारीे ६३ श्रृङ्खलाको...